Eyona midlalo miBalaseleyo yeMoto yePC yePC | Iindaba zeGajethi
Eyona midlalo mihle yokubaleka yePC
Uhlobo lokuqhuba luhlala luyenye yezona zidumileyo phakathi kwabadlala umdlalo, kodwa kule minyaka ilishumi idlulileyo ibalasele ngokuthandwa yimidlalo yesenzo efana neBattleroyale efana neFortnite okanye iMOBA efana nol. Kodwa baninzi kuthi abonwabileyo ukuqhuba imidlalo, nokuba yeyokuzonwabisa okanye yokulinganisa, njengoko zisivumela ukuba sibaleke kwaye sikhuphisane nezithuthi ebesingenako ebomini bokwenyani. Uyolo kubo bonke abathandi beemoto.
Iindidi zezihloko ezikhoyo kunye nokuhamba rhoqo kupapasho kuncinci, kodwa sisenekhathalogu ebanzi yemidlalo yolu hlobo lutyebileyo. Abona badlali bangaqhelekanga badla ngokukhangela imidlalo apho imvakalelo yesantya, lula ukuphatha, ukusebenzisana nendalo esingqongileyo kunye nokubanakho ukutshabalalisa imbangi. ngomothuko ngqo. Kwelinye icala, uninzi lwezinto ezihlambulukileyo zikhangela ukulinganisa apho umdlali avuzwa ngokwenza i-braking efanelekileyo ukuphucula amaxesha. Kweli nqaku siza kuphakamisa ukuba yeyiphi eyona midlalo ilungileyo yohlobo lokubaleka kwiPC.
1 Imidlalo yokulinganisa yomdyarho
1.1 Iimoto zeProjekthi 3
2 Imidlalo yokuqhuba yeArcade
2.3 Isidingo sokuKhawulezisa: Ukuphishekela ngokutsha okutsha kwakhona
2.4 Ukutshiswa kweParadesi ebuyisiwe
Imidlalo yokulinganisa yomdyarho
Iimoto zeProjekthi 3
Ku malunga ne isavenge sesithathu kolunye ushishino lwevidiyo yomdlalo weqonga obalaseleyo. Iyakwazi ukuhambisa iimvakalelo ezinzulu, iimvakalelo kunye nolonwabo olukhulu kwihlabathi elinamandla lokuqhuba ngemoto ngotshintsho olubalulekileyo ekubhekiseni kunikezelo lwalo lwangaphambili.
Ulawulo luhlengahlengiswe ngokupheleleyo, oku kukhokelela kwinkqubo ehamba ngokukhawuleza ekonwabisayo, eyonwabisayo kwaye echanekileyo. Sifumana useto lwezakhono kuzo zonke iintlobo zabaqhubi beenqwelomoya, ukusuka kwelona gqala likhulu kunye neengcali ukuya kwezona zincinci izakhono kwaye zingaqhelekanga. Utshintsho lwemozulu ngexesha lokwenyani oko kuyakunika ubutyebi obuninzi kunxibelelwano kunye nokusingqongileyo kwaye kuya kongeza ukubaluleka kukhetho lweseto kunye namavili esenzela imoto yethu yokubaleka. Kolu hlelo siza kuba nesithembiso esikhulu semidlalo enje ngokuba siguquguqukayo kwaye sinzulu indlela eya kuthi ibonwabise abo badlala indima.
Cofa eli khonkco ukuba ufuna ukuthenga iiProjekthi ze3
Ngaphandle kwamathandabuzo elinye lamagama amakhulu kuhlobo lokubaleka kunye nokulinganisa imoto, eyahlukileyo kwifayile ye- Ilayisensi yothotho lweBlackpain GT. Isivumela ukuba silufumane olu khuphiswano lonwabisayo ngobunyani kunye nobunzulu obungazange babonwa ngaphambili. Singakhuphisana nawe ukuza kuwe nge ubomi bokwenyani abaqhubi abaseburhulumenteni, onke amaqela asemthethweni nazo zonke iimoto ezibalekayo kwigridi.
Sifumana iindidi ezininzi zesekethe zokwenyani eziphinda zenziwe kwimilimitha ziinjineli eziphambili ngenxa yenjini yemizobo Injini engabonakaliyo 4. Ngaphandle kwamathandabuzo yenye yezona zinto zihamba phambili zokulinganisa kwimarike, ethi iphumelele xa siyonwabela nayo ivili lokuqhuba elilungileyo, esinokuthi ngalo siphawule ukungafikeleli kwe-asphalt, eya kwenza ukuba amava ethu okuqhuba abe yinyani ngakumbi.
Isimulator kaMicrosoft, ephuhliswe nguGuquka u-10, ukwazile ukugcina le mfuno idlalwayo kunye nobunyani obuyichazileyo okoko yaqala ukufakwa. Eyona nto intsha yokufakwa kwale fomathi yinkqubo enzulu yomkhankaso ngemidyarho yokhuphiswano kunye nobukrelekrele bokuzenzela kwiintshaba zethu ezifanelekileyo ukukhankanywa, ulawulo oluphuculweyo kakhulu lokuphathwa kwalo ngomyalelo.
Enye inqaku lokudumisa yinkalo yobugcisa, into enomdla ukuba singayidlala kwi4K nakwi60FPS. Kwinqanaba lomxholo alikho mva kakhulu, ngaphezulu kune I-700 yenzakele kunye neesekethe ezingama-32 iyafumaneka, umdlalo opheleleyo wabadlali abaninzi abagcwele imicimbi yethutyana Ngaphandle kwamathandabuzo esinye sezalathiso zohlobo, nangona ukudlala nomlawuli kuyinto emnandi enkosi ulawulo oluphuculweyoSisoloko sicebisa ukudlala nge-shuttlecock elungileyo.
Cofa kwikhonkco lokuthenga iForza MotorSport 7
Enye yezona simulators zifunwa kakhulu kuhlobo lokuqhuba, luyinyani kwaye lujolise kukhuphiswano lwe-Intanethi. Inolawulo olumangalisayo olunamanqanaba angaphaya kwinyani evumela abona bantu bathanda ukuqhuba ukuba bonwabele ukuqhuba nzima. Njengoko besitshilo ngaphambili, malunga noku kuya kuba kubalulekile ukuba nevili lokuqhuba elifanelekileyoKuba, njengemidlalo edlulileyo, iRacing iyakwazi ukuhambisa yonke into eyenzekayo kwi-asphalt kwivili lokuqhuba.
Alithandabuzeki elokuba eyona nto ibalulekileyo kule simulator yinkqubo yayo yokukhuphisana kwi-Intanethi, kuba ibandakanya ilayisensi yokhuphiswano ehlalutya inqanaba lethu lokuqhuba kunye nokuziphatha kwethu emzileni, ukusifumana sikhuphisana nabo. Isihloko sinereferensi ebanzi yeemoto kunye nobuninzi beetrekhi ezikhoyo kubuhlanga. Iilayisensi ezisemthethweni ezinjengeeyure ezingama-24 zeLeMans, Khombisa okanye iNascar. Ngaphandle kwamathandabuzo yenye yezona zinto zigqibeleleyo zifunwayo ze-PC.
Ukugqiba ngolu luhlu lweemodeli ezizenzekelayo, masihambe nazo eyona nto ikufutshane kwi-simulator yobungcali, Isindululo esiza kutsala abo bafuna ukuhlala amava afanayo nokubaleka kwisekethe yokwenyani. Inxalenye embi yako konke oku yile Abadlali abancinci abanobuchule banokukhathazeka xa kufikwa ekufumaneni ivili kunye nale simulator, ukongeza ujongano oluthile olufutshane kunye neinjini zemizobo engakhangeli kubi kodwa engakhazimli kancinane kukhuphiswano lwayo. Abaphuhlisi ngokungathandabuzekiyo bahlawule kakhulu ingqalelo kwi-physics kunye nokuyinyani okudluliselwe kwivili lokuqhuba kunye nokubekwa kwayo.
Amanqaku awomeleleyo ale simulator ngokungathandabuzekiyo kukuyinyani kwayo njengoko sinike ingxelo kunye nenani leeparameter zoqwalaselo kuseto lweemoto zethu. Utshintsho lwemozulu oluya kutshintsha ngokupheleleyo kulawulo lwezithuthi zethu, ukusinyanzela ukuba siqwalasele yonke into kwakhona kwaye sifune nangakumbi kwivili. Ngaphandle kwamathandabuzo, imowudi ye-Intanethi ayikude emva kuba uluntu lwayo lukhulu kwaye kumnandi kakhulu ukukhuphisana ukuphucula yonke imihla.
Imidlalo yokuqhuba yeArcade
Ukujolisa kubaphulaphuli abaqhelekileyo, iMicrosoft yakhupha kwimikhono yayo yeyona nto iqhuba umdlalo wayo wokuqhuba. Umdlalo osibeka kwilizwe elivulekileyo apho sinokuhamba ngokukhululekileyo siqhuba izithuthi zethu sisenza zonke iintlobo zemiceli mngeni okanye iinjongo, kunye nogqatso kunye nabachasi abakwi-Intanethi. Amanqaku ayo omeleleyo ngaphandle kwamathandabuzo lelizwe livulekileyo sele likhankanyiwe, imizobo yayo ebabazekayo kunye nenqanaba lokwenza ulwenziwo lwezithuthi. Ulawulo yinto esingenakulibala nokuba kungoku Ukuma kwindawo ethile phakathi kwe-arcade emsulwa kunye nokulingisa okungafunekiyo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, lo mdlalo uphawule ngaphambi nasemva, uthatha izingqinisiso ezivela kwiQela eliKhawulezayo okanye iKlabhu yasebusuku, apho sikonwabele nemephu enkulu apho sibaleka sisebenza ngokukhululekileyo, iintlanganiso okanye imidyarho. Umdlalo omnandi apho ukongeza kukhuphiswano, sinokuphumla ngokuthatha nje ukukhwela, ukufikelela kwimiceli mngeni yesantya ngokuvuthela zonke iiradad kuhola wendlela. Iindidi zezithuthi zikhulu, zisuka kuluncedo, ngaphandle okanye kwiimoto zemidlalo eziphezulu.
Cofa eli khonkco ukuba ufuna ukuthenga iForza Horizon 4
Kuluhlu lweyona midlalo ilungileyo yokuqhuba asinakulibala ilizwe elimnandi kwaye akukho mathandabuzo yenye yeendlela zokuqhuba ezinomtsalane nezinomdla. Olu hlelo lugcina ulungelelwaniso olukhulu phakathi kokufuna nokuzonwabisa, Ukuvumela nawuphi na umdlali ukuba aziqhelanise nokuzonwabisa ngaphandle kokukhathazeka kakhulu.
Iimodyuli ezikwi-Intanethi zikhuphuke kakhulu ngenkqubo enamandla yeeligi kunye nemiceli mngeni, nangona imo yomkhankaso ibingasemva ngenxa yokusilela kobunzulu. Amava e-DIRT 4 ashwankathelwa ngolonwabo kwaye afune umlinganiso olinganayo, nto leyo eyenza ukuba kube ngumdlalo obalulekileyo kwabo bafuna umdlalo weemoto abanokuba nexesha elimnandi bebodwa nakwi-Intanethi.
Cofa kwikhonkco ukuze uthenge i-DIRT 4
Isidingo sokuKhawulezisa: Ukuphishekela ngokutsha okutsha kwakhona
Ukumkani we-arcade yokuqhuba ngekhe abekho kolu luhlu kwaye ukuFunwa kweSantya ngokungathandabuzekiyo kuyimfanelo yayo yenye yezona zibaluleke kakhulu zolu hlobo. Lo mdlalo wevidiyo uhambisa zonke izoyolo ebezihanjiselwa yi-saga kuthi oko yaqala kwiminyaka engama-20 eyadlulayo. Imizobo ephawuleka ngokudityaniswa nomdlalo obalaseleyo walo naluphi na uhlobo lomdlali owenza ukuba kube mnandi emva kwevili leemoto ezahlukeneyo.
Umdlalo uqhayisa ngokubonakalayo Amapolisa aleqa iindlela ezinkulu ezinde kwimephu enkulu. Kusemnandi njengosuku lokuqala ukubuyela emva kwevili kwaye wenze iintlobo ngeentlobo zemishini yokuhambelana nesandi somculo esimnandi nesonwabisayo. Umdlalo ekufuneka uzame ngokuqinisekileyo ukuba awukenzi okwangoku, usebenzisa ithuba lokuphinda uqalise.
Cofa kwikhonkco ukuba ufuna ukuthenga ukufuna ukukhawuleza: Ukuphishekela okutshisayo
Ukutshiswa kweParadesi ebuyisiwe
Enye intsomi yokuqhuba i-saga engenakuphulukana nolu luhlu. Ukukhutshwa kwangoko kwale saga ngobuso obenza ukuba ibenomtsalane ngakumbi ukuba kunokwenzeka, nangona ikumgangatho wegraphic wangoku, inecandelo elibonakalayo elinomtsalane kwaye igcina ukudlala kwayo kufanelekile. Ukuphazamisa i-supercar yethu kunye nokuyishiya iyingozi kakhulu akuzange kube mnandi kakhulu.
Umdlalo omnandi nge Ukuphathwa okulula kakhulu apho kufuneka sikhathazeke kuphela ngokugqiba kwindawo yokuqala, ukuzama ukwenza ukuba abo basincintisanayo balume uthuli ngokudibana. Isandi sihamba nesantya sokudlala somdlalo waso ngemixholo engalibalekiyo neguqukayo ethi isibuze ngesantya esingaphezulu. Umhlaba wayo ovulekileyo uzele yimishini kunye neenjongo zokuzalisekisa, kunye neemfihlo zokutyhila, ngaphandle kwamathandabuzo esona sihloko silungileyo kule saga ekufanele ukuba udlale kwakhona.
Cofa kwikhonkco lokuthenga iParadise yokuDinwa
Akukho nqanaba okwangoku!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » Eyona midlalo mihle yokubaleka yePC
Inqaku elibonakalayo, ukuba ungangena vracing.com.ar zezona simulators zibalaseleyo!
UPaco L Gutierrez sitsho
Phendula kuPaco L Gutiérrez
IPhone 12 Pro VS Huawei P40 Pro, yeyiphi eneyona khamera intle?
I-Huawei FreeBuds Pro, enye indlela eya kwi-AirPods Pro ebesiyilindile